Afaka Mitondra Sy Mihinana Ny Mofomamin’izy Ireo Ao Amin’ny McDonald’s Ny Malaiziana — Saingy Tsy Maintsy Mofomamy Halal Izany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2017 4:31 GMT
McDonald's ao Malezia. Sary tao amin'ny pejy Flickr an'i Martin Lewison, Lisansa CC
Voatsikera ny fanapahan-kevitry ny foiben'ny goavan'ny trano fisakafoanana McDonald's ao Malezia mandràra ny fidiran'ny mofomamy tsy halal ao anatin'ny faritrany noho izy voalaza fa mampiroborobo ny endrika islamo tsy mandefitra sy hiringiriny.
Maro an'isa ny mponina Maley Miozolomana ao Malezia, na dia miaro ny firaisana ao anatin'ny fahasamihafan'ny firazanana sy ny vondrona ara-poko aza ny fanjakana.
Ny fanamarinana Halal ao Malezia dia midika fankatoavan'ny manampahefana ara-pivavahana ofisialy ny vokatra ara-tsakafo ho manaraka ny fenitra islamika
Niparitaka be tao amin'ny media sosialy ity fanamarihana tamin'ny magazain'ny McDonald's momba ny fandraràna ny mofomamy tsy halal ity:
Mihavery saina hatrany i Malezia
Nanamafy ny McDonald's fa mandràra ny mofomamy tsingeritaona tsy-halal izy ho fanajàna ny toro-lalan'ny Sampana Fampandrosoana Islamika Silamo ao Malezia (Jakim):
Amin'ny maha orinasa manome vokatra voamarina fa halal ihany, mametraka politika ara-tsakafo anatiny izahay mba hiantohana fa halal avokoa ny vokatra rehetra omena sy jifaina ato amin'ny trano fisakafoananay.
Raha misy ny fety tsingeritaona ato amin'ny McDonald's, afaka mitondra ny mofomamin'izy ireo manokana ny mpanjifa noho izany fety izany, saingy tsy maintsy voamarina fa halal ilay mofomamy
Maro ireo namaritra ny politikan'ny McDonald's fa tsy ilaina sy sarotra. Mariam Mokhtar, mpanao famakafakana ao amin'ny Free Malaysia Today, nanazava ny antony mahatonga ny olona ho diso fanantenana.
Misy ireo renim-pianakaviana manamboatra ny mofomamin'ny tsingerintaonan'ny zanak'izy ireo amin'ny fety ao amin'ny McDonald's. Ary misy ireo mampanamboatra izany any amin'ny olona tahaka ahy, izay mankafy manamboatra mofomamy ho an'ny namana.
Ka inona no ataon'ny ray aman-dreny raha mitaky mofomamy voamarina fa halal ny McDonald's amin'ny iray amin'ireo mofomamiko?
Tafahoatra ve ny politikam-panamarinana halal? Indray andro any ve isika hahita politika ara-pitondran-tena mameno ny isan-tokatrano mba ho azo antoka fa mihinana sakafo halal fotsiny isika? Rahoviana vao hanjaka ny fahaiza-mahatakatra?
Nanizingizina i Roziah Daud, izay mitantana magazay mofomamy antserasera fa ny fangaron-tsakafo ampiasaina amin'ny fanamboarana mofomamy dia vokatra halal amin'ny ankapobeny, tahaka ny lafarinina, atody sy siramamy:
Tsy tokony ho olana akory izany. Indraindray, rehefa mandeha any amin'ny trano hafa fisotroana kafe mahazatra ianao, tsy mangataka aminao izy ireo hoe avy aiza ny mofomaminao sy hoe halal ve sa tsia. Atsaharo ny manontany ny fiainana manokan'ny olona! Raha izy ireo ihany no mihinana ny mofomamin'izy ireo, ahoana no ahafahanao mametraka fitsipika tahaka izany?
Mandritra izany, namoaka fanambarana ny Fikambanana Tsy Miankina, Foiben'ny Rahampitso Tsara Kokoa (Cenbet), mandrisika ny Jakim mba handinika indray ny fampiharana hentitra mikasika ny fitsipika fanamarinana halal :
Raha manan-jo handràra ireo mpanjifa tsy hitondra sakafo avy any ivelany ny trano fisakafoanana, tokony hifototra amin'ny fijerena ny ara-barotra ny fanapahan-kevitra fa tsy amin'ny hoe voamarina fa halal ve ny sakafo sa tsia. Amin'izay, tsy tokony hihoatra ny famerany ny Jakim amin'ny fankatoavana ny «toerana» fa tsy ny «sakafo». Tsy tokony hampitahotra ireo mpandraharaha ara-tsakafo ihany koa izy. Fanararaotam-pahefana ny fanaovana izany.
Tsy resaka fanajana ny fitakiana ara-tsakafon'ny Miozolomana izany. Fa tsy tokony hamela ny mpitrifana hanao fitaovana ny fivavahana amin'ny tanjona ara-politika isika.
Nampitandrina ny vondrona fa mety nohararaotina ny baikon'ny Jakim mba hanamarinana ny fitsabahan'ny fanjakana ao anatin'ny fiainana manokan'ny olom-pirenena tsotra:
… Hanokatra varavarana ho an'ny sehatra maro kokoa hanavaka ny sehatra halal-tsy halal izany, tahaka ny fitateram-bahoaka, ny sekoly, ny sehatry ny fampiantranoana sy ny ara-pitsaboana. Hanasaraka ny vahoaka amin'ny fivavahana izany, indrindra amin'ny fotoana ilàna ny fanamafisana ny firaisankina manoloana ny fitomboan'ny fitrifana.
Niaro ny zon'ny Jakim amin'ny fanatsarana ny mahasoa ny Miozolomana kosa ny vondrona miantso ny tenany hoe Tanora Matihanina:
Tsy manaja ny zavatra mahasaro-piaro ny Miozolomana mpandeha any amin'ireny trano fisakafoanana sy hotely fandraisam-bahiny voamarina fa halal ireny ny fitakian'ny Cenbet fa tokony avela any amin'ireny toerana ireny ny sakafo tsy halal, ka mody lazaina fa voamarina fa halal izy ireny ary noho izany afaka amin'ny singa tsy halal.
Ahoana no ahazoana hoavy tsara kokoa raha tsy misy ny fahasarotana amin'ny filàna ara-tsakafo isan-karazan'ny finoana iray manokana, ny islamo izao eto?
Tsy niombon-kevitra tamin'ity fehin-kevitra ity kosa ilay bilaogera KTemoc:
Raha hoentina ao amin'ny Macca [McDonald's] ny mofomamy tsingerintaona voamarina fa tsy halal, mety hamindra any amin'ireo sakafo karakarain'ny Macca [McDonald's] ve? Tsia, mandrahona ny Miozolomana sy ny zony hampihatra ny finoany mifanaraka amin'ny fepetra manokan'izy ireo ny tsy-Miozolomana maka mofomamy tsingerintaona voamarina fa tsy halal ao Macca.
Efa niala tsiny ny McDonald's noho ny famoahana fanambarana nanohintohina ny maro tamin'ireo mpanjifany, saingy nilaza ihany koa izy fa hanohy hampihatra ny fandraràna noho ny fampanantenany amin'ny fanomezana sakafo halal.
Tsy vao sambany ny olana momba ny fanamarinana halal no nisarika ny sain'ny vahoaka. Tamin'ny volana Oktobra lasa teo, nohadihadian'ny manampahefana ny orinasa ara-tsakafo iray noho izy manome ‘hotdogs’ amin'ny karazan-tsakafony.